Carnival Cruise Line hamerenana indray ireo sambo fanampiny amin'ny volana septambra sy oktobra
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Carnival Cruise Line hamerenana indray ireo sambo fanampiny amin'ny volana septambra sy oktobra
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Carnival Cruise Line hamerenana indray ny sambo fanampiny amin'ny volana septambra sy oktobra
Maherin'ny antsasaky ny andian-javaboary karnaval no handeha sambo amin'ny volana oktobra miaraka amin'ny drafitra karnavaly hanohizana ny fandehanana mitsangantsangana vita vaksiny.
Sambo Carnival telo indray no hanohy ny asany amin'ny volana septambra, ary ny efatra amin'ny volana oktobra.
Ny Carnival dia hanohy handray ireo vahiny mbola tsy voamarina anaty sambo, fa ny vahiny rehetra tsy voamarina, anisan'izany ny ankizy, dia iharan'ny fitsapana mialoha ny fitsangantsanganana an-tsambo sy alohan'ny fitsidihana.
Ny vahiny nasaina sy mpanolotsaina momba ny dia dia ampandrenesina ny drafitra momba ireo sambo miverina.
Karnavalin'ny Cruise Line nanambara androany fa sambo telo indray no hiverina hiasa amin'ny volana septambra, ary efatra hafa amin'ny volana oktobra - ka hahatratra 15 ny isan'ny sambo - satria mbola mitombo hatrany ny fahombiazan'ny tsangan'asa. Miorina amin'ny fahombiazan'ny fiverenan'ny serivisy voalohany sy ny valin'ny mpitsidika ny traikefa an-tserasera sy ny fiarovana ny fiarovana ary ny fiarovana izay nampiharina, Carnival dia hanohy ny asany ny sambo rehetra amin'ny fitsangatsanganana vaksinina hatramin'ny faran'ny volana Oktobra.
Ireo sambo telo ho an'ny volana septambra dia ny Carnival Glory avy any New Orleans, manomboka ny 5 septambra, ny Carnival Pride avy any Baltimore, manomboka ny 12 septambra, ary ny Dream Carnival avy any Galveston, manomboka ny 19 septambra.
Raha miverina amin'ny volana Oktobra, ny sambo efatra fanampiny hanombohana dia ny Carnival Conquest avy any Miami, manomboka ny 8 Oktobra, ny karnavaly Freedom avy any Miami, manomboka ny 9 Oktobra, ny Fetiben'ny Karnavaly avy any Port Canaveral, manomboka ny 11 Oktobra, ary ny Sarnan'ny Karnavaly avy amin'ny Finday, mahomby 21 Oktobra.
Mifandraika amin'ity fanambarana ity, Fetibe dia mampandre ny vahiny sy ny mpiasan'ny dia momba ny fanitarana ny fiatoana amin'ny asany hatramin'ny 5 septambra ho an'ny Carnival Pride avy any Baltimore, 11 septambra ho an'ny Dream Carnival avy any Galveston, 4 Oktobra ho an'ny Fetibe Carnival avy any Miami ary 16 Oktobra ho an'ny Sivalan'ny Karnavaly avy amin'ny Mobile . Ny fitsangantsanganana an-dranomasina amin'ny Carnival Sunshine avy any Charleston, Carnival Ecstasy avy any Jacksonville ary Carnival Liberty avy any Port Canaveral dia hofoanana hatramin'ny 31 oktobra. Ho fanampin'izany, dia fitsangatsanganana mandritra ny telo andro amin'ny Carnival Miracle avy any Long Beach amin'ny 24 septambra no nofoanana, ary avy eo Carnival Hanomboka sambo avy any Long Beach ny 27 septambra i Miracle.
"Faly be izahay amin'ny famerenanay indray ary mankasitraka ny fanohanan'ny vahininay, ny mpiasan'ny dia ary ny mpiara-miombon'antoka amin'ny seranan-tsambo," hoy i Christine Duffy, filohan'ny Carnival Cruise Line. "Amin'ny faran'ny volana jolay dia hanana sambo dimy ao amin'ny drafitra fanombohana izahay, ao anatin'izany ny fampidirana ny serivisy ao amin'ny Mardi Gras, ary mahita fitambarana fitakiana fangatahana mafy izahay ary valiny mahafa-po ny vahiny izay mifamatotra amin'ny traikefa ananan'ireo vahiny tsara. ”
Ny karnavaly dia hanohy handray ireo vahiny mbola tsy voamarina anaty sambo, fa ny vahiny rehetra tsy voamarina, anisan'izany ny zaza latsaky ny 12 taona, dia iharan'ny fitsapana mialoha ny fitsangantsanganana an-tsambo sy alohan'ny fitsangatsanganana alohan'ny fitsinjaram-pahefana (amin'ny fitsangantsanganana lava kokoa noho ny efatra andro) miaraka amin'ny 150 $ isaky ny olona no miantoka ny vidin'ny fanandramana, ny fanaovana tatitra ary ny fizahana ny fahasalamana sy ny fiarovana. Amin'izao fotoana izao, ny fetibe dia mametra ny fandidiana ny fandaharan'asan'ny tanora arahi-maso amin'ny zaza vita vaksiny 12 taona no ho miakatra. Ireo vahiny tsy vita volo, miainga avy any Florida (manomboka ny 31 Jolay) sy Texas (manomboka ny 2 Aogositra) dia mila mampiseho porofo momba ny fiantohana amin'ny fiantohana fitsangatsanganana, miorina amin'ny làlana fitaterana an-tsambo sy ny fitakiana ny seranan-tsambo sy ny toerana itodiana. Ireo fepetra fanampiny ireo dia hapetraka hatramin'ny faran'ny volana Oktobra farafaharatsiny fa mety hitarina arakaraky ny torolàlana avy amin'ny mpanolo-tsaina ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpitsabo ary ny zavatra takian'ny mpiara-miombon'antoka.